‘नर्सहरूको वर्ष २०२०’, जो छन् काेराेना भाइरसविरुद्ध लडाइँको अग्रमोर्चामा – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख ३० गते ११:१९
‘जब एउटा जीवन बचाउँछौ तिमी हिरो हुन्छौ तर, जब सयौं जीवन बचाउँछौ अनिमात्रै नर्स बन्छौ।’
आधुनिक नर्स विज्ञानसँग जोडिएर जब ‘हातमा बत्ती लिएकी केटी’ आउँछिन्, अनि त्यो दियोको उज्यालोमा नर्सहरूको महत्व देखिन्छ।
ती केटी हुन्, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल। जो आधुनिक नर्सिङको जन्मदाताका रूपमा चिनिन्छिन्। उनैको आज २००औं जन्म दिन हो।
क्रिमिनिया युद्धका बेला उनले घाइते सिपाहीहरुलाई उनले गरेको सेवालाई विश्वभर ‘नर्सहरुको आदर्श’का रुपमा लिइन्छ। सम्पन्न परिवारमा जन्मिएकी उनी एक नर्समात्रै थिइनन्, उनी एक अभियन्ता पनि थिइन्।
नाइटिङ्गेलकै अभियानमा उनले बेलायतमा एउटा ‘स्वायत्त’ नर्सिङ कलेज स्थापना भयो। जसका लागि उनले लामो संघर्ष गरिन्। यहीँबाट नर्सिङको आधुनिक युग सुरुवात भयो।
उनै नाइटिङ्गेलको जन्मदिनमा आज अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस मनाइन्छ।
सारा विश्व कोरोना भाइरसको महामारीसँग लडिरहेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत वर्ष २०२०लाई ‘नर्सहरुको वर्ष’का रुपमा घोषणा गरेको छ।
निकै संक्रामक यो महामारीसँग लड्नका लागि अग्रमोर्चामा खटिएका विश्वका सारा नर्सहरुका लागि यो एउटा निकै महत्वपूर्ण सम्मान हो।
विश्वभर यसपालिको नर्स दिवसलाई साताव्यापी रुपमा मनाइएको छ। भाइरससँगको लडाईंका कारण यसपालि ‘औपचारिक’ कार्यक्रमहरु भने कतै छैनन्।
विश्वभर यो दिनलाई नर्सहरुप्रति कृतज्ञता दिएर मनाइएको छ। र, भनिएको छ ‘नर्सहरुलाई धन्यवाद।’
कैयौं देशहरुले विश्वका करिब २ करोड नर्सहरुको सम्मानमा आज आआफ्नो घरघरमा दियो बाल्न भनेका छन्।
र, यसवर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवसको मुख्य नारा छ ‘नर्स : सबैको स्वास्थ्यका लागि सधैं उठ्ने एक आवाज।’
कोरोना भाइरसको विश्वमहामारी- नर्सलाई अझैं ‘बहादुर’ प्रमाणित गर्ने अवसर
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २३ वर्षदेखि कार्यरत नर्स हुन्, बेली पौडेल। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो भएन। र, उनी पनि दिनरात यो भाइरसविरुद्धको लडाईंमा खटिएकी छिन्।
करिब ३ महिनादेखि उनीजस्ता हजारौं नर्सहरु आफन्त अनि परिवारबाट टाढिएका छन् र, बिरामीका नजिकमा छन्, अग्रमोर्चामा।
‘बिरामीलाई निको बनाउन औषधि मात्र महत्वपूर्ण होइन, बिरामीको हेरचाह अझैं महत्वूर्ण हुन्छ, नर्सिङ महाशाखाकी प्रमुख रोशनी तुईतुई भन्छिन् ‘जुन काम नर्सहरुले गरिरहेका हुन्छन्।’
युद्धले घेरिएको ‘आइसोलेसन’मै जीवन बिताएकी नाइटिंगेलको एउटा भनाईलाई मान्ने हो भने, बिरामीका लागि सबैभन्दा पहिला त वातावरण नै बनाउनुपर्छ, जो नर्सले मात्रै गर्नसक्छन्।
त्यसमा पनि अहिले यो कोरोना भाइरसविरुद्ध कुनै औषधि बनेको छैन। त्यसैले बिरामीका लागि उपयुक्त वातावरणको सिर्जना नर्सहरुको पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ। यो बेला बिरामीका लागि नर्सहरुले गर्ने ‘स्याहार’ नै ठूलो औषधि हो।
जसरी युद्धमा घाइते सिपाहीहरुका लागि नाइटिंगेलका ‘वाणी’हरु औषधिजस्तै लाग्थे र चोटले छटपटाइ रहेका घाइते सिपाहीहरूमा हिम्मत भरिन्थ्यो।
नर्सको अर्काे महत्वपूर्ण क्षमता भनेको बिरामीको मनोबल बढाउनु हो। ताकि मानसिक रुपमै उनीहरु ‘बिमार’को महसुस नगरुन्। ‘बिरामीसँगै हुने हो। उनीहरुकै नजिकमा रहेर उनीहरुको मनोबल बढाउने हो’ तुईतुई भन्छिन्, ‘जसले गर्दा बिरामीले मनको शक्तिले रोगलाई जित्न सकोस्।’
टेकु अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भर्ना भएको पहिलो दिन। सबै जना पछाडी हटेका थिए । तर, त्यो बेला ‘नर्सिङ टिमले गर्न सक्छ’ भनेर अगाडी बढे। अनि बल्ल अरु पनि त्यो टिममा सामेल भए।
विश्वभरि फैलिइरहेको नयाँ रोग। केही डर त थियो नै तर, पनि अगाडि मानवता थियो, अनि नर्सहरु अघि सरे।
‘अहिले जति पनि नर्सहरु कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेका छन्, काम गर्ने नर्सहरु हुनुहुन्छ तर, नाम अरु कै आइरहेको हुन्छ’ उनी भन्छिन्।
नर्सहरुको सेवाबाटै बिरामीको आत्मबल बढ्ने हो। जुन आत्मबल नर्सहरुको निरन्तर सेवाभावले बलियो बनाउँछ। उनी भन्छिन्, ‘यो औषधि खानुस्, वा यस्तो उस्तो गर्नुस् भन्दामात्रै बिरामी ठीक हुँदैनन्।’
डाक्टरहरु त बिरामी ‘हेर्न’मात्रै आउँछन्। तर नर्स बिरामी भर्ना भएर देखि निको भएर घर नजाँदासम्म सम्म रेखदेखमै हुन्छन्।
‘डाक्टरहरू दिनमा एक–दुईपटक आउनुहुन्छ, बिरामीको अवस्था हेरेर जानुहुन्छ, नर्स बेली पौडेल भन्छिन्, ‘बिरामीले खाएको छ कि छैन, उपचारको प्रोगेस कति भएको छ, यस्ता हरेक कुराको ख्याल नर्सबाटै भइरहेको हुन्छ ।’
नर्सिङ पेशासामा आउँदा उनको कसम थियो ‘बिरामी बचाउने।’ र, यो उनीजस्ता हरेक नर्सको पेशागत ‘कसम’ नै हो।
बिधागत सेवा विस्तार
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको नर्सिङ क्षेत्रले चरम अस्तव्यस्तता भोगिरहेको छ। बेरोजगारी उस्तै छ। ‘रोजगार’ नर्सहरुको पनि श्रमशोषण उस्तै छ।
अरु बेलामा भन्दा महामारीको बेला नर्सिङको भुमिका अझै महत्पूर्ण हुने क्रिटिकल केयर नर्सेस एसोसिएसन नेपालकी महासचिव कविता सिटौला बताउँछिन्। ‘महामारीको बेला नर्सले सैनिकले लडाइंर्’मा जसरी काम गरिएको उनको भनाई छ।
नेपालको नर्सिङ क्षेत्र विकसित हुनको लागि विधागत सेवा क्षेत्रहरु बढाउँदै जानुपर्ने सिटौला बताउँछिन्। ‘क्रिटिकल कियर नर्स, इन्फेक्सन कन्ट्रोल नर्स, अप्रेशन थिएटर नर्स भनेर छुट्याउन सके नेपालको हेल्थकेयर सिस्टम अझ बलियो हुन्छ’ उनी भन्छिन् ‘विश्वका धेरै देशमा लागु भएका यस्ता सिस्टमहरुले देशको स्वास्थ्य सेवा राम्रो हुन्छ।’
नेपालमा नर्स जनशक्तिको अवस्था के छ ?
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको आधारमा नेपालमा नर्सको संख्या ९५ हजार ३ सय ६३ छ। त्यसमध्ये ६० हजार ७ सय नर्स रहेका छन्, भने ३३ हजार ७ सय २४ मिडवाइफ छन्। विदेशी नर्स ८ सय ८४ रहेको काउन्सिलले जनाएको छ।
नेपालमा रहेका नर्समध्ये २० हजार रोजगार र झन्डै ४० हजार बेरोजगार रहेको काउन्सिलको अनुमान छ। दिवस मनाइरहँदा सेवामा रहेकाको दोब्बर नर्स कामको खोजीमा भौँतारिइरहेको विकराल दृश्य पनि लुकेको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा हाल १० हजार नर्स कार्यरत छन्। निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरुको कुनै तथ्यांक छैन।
२७ वर्ष पुरानो दरबन्दी
सरकारले ०५० सालमा निर्धारण गरेको दरबन्दी संख्यामा अहिलेसम्म पनि वृद्धि गरिएको छैन। नर्सिङ महाशाखाको तथ्यांकअनुसार नर्सको दरबन्दी संख्याको विश्लेषण गर्दा अनमीको दरबन्दी संख्या ८ हजार ५ सयको हाराहारीमा छ। त्यसैगरी, स्टाफ नर्सको १ हजार ६ सय, नर्सिङ अधिकृतको १ सय ९, सामुदायिक नर्सिङ अधिकृतको २८, नर्सिङ प्रशासकको २७, प्रमुख नर्सिङ प्रशासकको ५ दरबन्दी रहेको तथ्यांक छ।
कसरी मनाइदैँ छ नर्सिङ दिवस ?
सारा विश्व अहिले कोरोना भाइरसको संक्रामक महामारी चपेटामा छ। यो भाइरसका कारण करिब २ लाख ८७ हजार ३ सय ३२ ज्यान गइसकेको छ। र, मृत्युको यो लिस्टमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरु छन्।
र, त्यसैमा पनि करिब १ सयभन्दा बढी नर्सहरुको मृत्यु भइसकेको अन्र्तराष्ट्रिय नर्सिङ परिषदले जनाएको छ।
विश्व नर्सिङ दिवसमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा शुभकामना सन्देश दिएका छन्।
त्यस्तै नर्सिङ महाशाखाको नेतृत्वमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका करिब एक हजार नर्सहरु महामारी र नर्सिङ नेतृत्वको बारेमा भिडियो कन्फ्रेन्स गर्दैछन्।
Tags: नर्स, नर्सिङ, पुष्पराज चौलागाईं